क्यान्सर अस्पतालमा नयाँ सेवा : दाँत र मुटुको उपचार थपिँदै – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
क्यान्सर अस्पतालमा नयाँ सेवा : दाँत र मुटुको उपचार थपिँदै
२०७७ आश्विन २२, बिहीबार ०८:४२ गते
भरतपुर । विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा थप दुईवटा विशिष्ट उपचार सेवा थपिने भएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. देजकुमार गौतमका अनुसार अबको २ महिनाभित्र दाँत र मुटुसम्बन्धी सेवा थपिन लागेको हो ।
‘चाडबाडलगत्तै सेवा दिने गरी तयारी भइरहेको छ, कार्यकारी निर्देशक डा. गौतमले भने, ‘अब क्यान्सरको उपचार गर्न आउने बिरामीले अतिरिक्त विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन् ।’ चीनको सहयोगमा स्थापित यो अस्पतालमा हाल ४५० शøया रहेका छन् ।
दाँतको उपचारका लागि चीनबाट विशिष्ट चिकित्सकहरु समेत आइसकेको उनले जानकारी दिए । यसअघि प्रभावित बनेको न्यूरोसम्बन्धी सेवा पनि हाल नियमित सञ्चालन भइरहेको डा. गौतमले बताए । ‘हामीसँग विशिष्ट सेवा दिने डाक्टर छन्, केही अभाव भएको अवस्थामा पनि अन्य अस्पतालबाट डाक्टर व्यवस्था गरेर सेवा दिइरहेका छौँ’, कार्यकारी निर्देशक डा. गौतमले भने, ‘भएको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र थप विशिष्ट सेवा दिने लक्ष्य अस्पतालले लिएको छ ।’ क्यान्सरका सबैजसो साधारण उपचार यहाँ गरिने भए पनि विशिष्टीकरण गर्न लागिपरेको उनले बताए ।
अस्पतालमा अत्यावश्यक केही उपकरणहरु खरिद प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । रेडियोथेरापीको पछिल्लो भर्सन ल्याउने तयारी भएको उनले जनाए । ‘पुराना मेसिनहरु मर्मतसम्भार र आवश्यकताअनुसार नयाँ किन्ने काम भएको छ, अस्पताललाई आर्थिक हिसाबले मितव्ययी बनाउन हामी लागिपरेका छौँ’, डा. गौतमले भने, ‘क्यान्सर अस्पतालमा अन्य विशिष्ट सेवाहरु पनि पाउने वातावरण हामी तयार पार्दैछौँ ।’
अस्पतालका उपनिर्देशक डा. कृष्णसागर शर्माले दन्त र मुटुसम्बन्धी सेवापछि अन्य विशिष्ट सेवा थप्ने योजनामा अस्पताल रहेको जानकारी दिए । कोरोनाका कारण दाँतको उपचार सेवा प्रभावित बनेको र केही समयपछि सुरू हुने उनले बताए । क्यान्सर समयमा नै पत्ता लगाएर उपचार गर्ने हो भने क्यान्सर पूर्णरुपमा निको हुने उनी बताउँछन् । पहिलो र दोस्रो चरणमा क्यान्सर पत्ता लाग्यो भने निको हुने सम्भावना पनि धेरै हुने उनको भनाइ छ । अस्पतालमा मेडिसिन, न्यूरो, रेडियोथेरापी, नाक–कान–घाँटी उपचार, सर्जिकल, क्यान्सर रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान, फिजियोथेरापीलगायतका सेवा छन् ।
भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा एक वर्षको अवधिमा झन्डै डेढ लाखले ओपिडी सेवा लिएका छन् । एक वर्षको अवधिमा एक लाख ४५ हजार ७७६ जनाले ओपिडी सेवा लिएकोमा ३२ हजार ८३१ जना नयाँ सेवाग्राही रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी गृहनारायण महतोले बताए । त्यस्तै, चार हजार ८९४ जना नयाँ क्यान्सरका बिरामीले पनि सेवा लिएका छन् ।
अस्पतालमा मेडिसिनतर्फ ३५ हजार २०७, रेडियोथेरापीतर्फ २३ हजार १३, नाक–कान–घाँटीतर्फ १४ हजार ९३२ जनाले सेवा लिएका छन् । एक वर्षको अवधिमा ७ हजार ९०८ बिरामी भर्ना भएका छन् भने तीन हजार ९३९ जनाको अप्रेसन भएको छ ।